Day 2 Morning Update: Filimka Kesari iyo sida uu ku furmay maalintiisa labaad subaxan Jimcaha ah – Filimside.net
Day 2 Morning Update: Filimka Kesari iyo sida uu ku furmay maalintiisa labaad subaxan Jimcaha ah
March 22, 2019 Zakarie Abdi
Superstar Akshay Kumar filimkiisa Kesari ganacsi adag ayuu sameeyay maalintiisa kowaad wuxuuna keenay 21 Crore (Trade Figure) ayadoo weliba shalay feestada Holi filimkan saameyn ku yeelatay madaama gelinka hore siweyn loo daawanin.
Haddaba Kesari ayaa maanta ku furmay oo Jimco ah 20% asigoo ka hooseeyo sidii uu shalay ku furmay oo ahayd 25% ilaa 30% madaama shalay gelinka dambe uu siweyn u gadmay iyo xalay fiidkii.
Inkastoo Kesari shalay ka bilaabasho hooseeyo haddana waxaa filimkan siweyn u caawineyso in maanta 100% tiyaatarada laga wada daawanayo subaxdii hore halka shalay subaxdii 25% ilaa 20% tiyaatarada laga daawananay inta dambe shalay 2:00 pm wixii ka dambeesay ayaa albaabada loo furay marka feestada Holi laga soo laabtay.
Waa hubaal maanta oo Jimco ah inuu sare u kac sameenayo filimka Kesari balse sare u kacii xooganaa ee shalay oo kale gelinka dambe ma sameyn karo madaama shalay gelinkii dambe dadka fasax heesteen markii feestada Holi soo dhameesteen hawlaha kuma laabanin ee fasax ayay ahaayeen laakiin maanta waa maalin shaqo.
Waxaa laga rabaa Kesari inuu maanta si wacan isku celiyo kadibna sabti iyo axad ayuu ganacsi aad u weyn sameyn doonaa marka laga cabir qaato sida uu subaxan ku furmay Kesari waa hubaal in 15 Crore keeni doono maalintiisa labaad waana ganacsi kale oo heer sare ah haddii ay sidaas dhacdo.
Fadlan Sample-ka hoose kaga bogo filimka Kesari sida uu subaxan kaga furmay magaalooyinka waa weyn iyo Shows-ka laga daawanayo ama shaashadaha laga daawanayo magaalo walbo sidoo kalena aan la bar bar dhignay sidii uu shalay subaxdii hore:
Delhi NCR: Khamiis subaxdii hore (30% & 680 shaashad), Jimco subaxdii hore (20% & 1010 shaashad)
Mumbai: Khamiis subaxdii hore (35% & 840 shaashad), Jimco subaxdii hore (15% & 1130 shaashad)
Pune: Khamiis subaxdii hore (30% & 350 shaashad), Jimco subaxdii hore (10% & 370 shaashad)
Bengaluru: Khamiis subaxdii hore (25% & 290 shaashad), Jimco subaxdii hore (25% & 290 shaashad)
Hyderabad: Khamiis subaxdii hore (45% & 340 shaashad), Jimco subaxdii hore (35% & 310 shaashad)
Kolkata: Khamiis subaxdii hore (35% & 170 shaashad), Jimco subaxdii hore (20% & 270 shaashad)
Ahmedabad: Khamiis subaxdii hore (40% & 290 shaashad), Jimco subaxdii hore (10% & 340 shaashad)
Chennai: Khamiis subaxdii hore (10% & 83 shaashad), Jimco subaxdii hore (10% & 83 shaashad)
Asc sxb zaki nala wadaaga cawo fiidkii iuo maanta duhurkii xaladiisa iyo heerka u gaaray